I-Raw Tianeptine Hemisulfate Monohydrate Powder (1224690-84-9) -Iphcoker
I-Tianeptine Sulfate, ekwabizwa ngokuba yiRaw Tianeptine hemisulfate monohydrate powder, yi …… ..
Iqela leziyobisi AbaPhakathi kunye neMichiza elungileyo
Enye yeendlela eziphambili zezenzo zeTianeptine hemisulfate monohydrate kukunyusa ukubanjwa kwe-serotonin (5-HT) kwingqondo nakwiiplatelets. Ngokungafaniyo nezixhobo ezininzi ze-tricyclic, i-Tianeptine ayibonakali inxulunyaniswa nokwehla kokusebenza kwengqondo okanye ukusebenza kwemoto. Kubonakala ngathi inemisebenzi kwinkqubo ye-glutamatergic, ethathelwa ingqalelo ukuba iyindlela yokulwa noxinzelelo.
Ngokwandisa ukuthatha i-serotonin, i-Tianeptine hemisulfate monohydrate ineendlela ezichaseneyo nee-SSRI zemveli. Izifundo zamva nje ziye zavavanya iimpembelelo zeTianeptine ngaphakathi kwesakhelo se-neuroplasticity hypothesis yoxinzelelo, apho inokuba nomsebenzi othile. Uphando lwamva nje lukwabonisa ukuba iTianeptine inokusebenzisana ne-adenosine A1 receptors.
▪ Ukuxhalaba, ukuxinezeleka kunye neempawu ze-nootropic
▪ Ukusebenza kwengqondo, nokuphucula ubuchule bokufunda
I-Tianeptine hemisulfate monohydrate dosage i-25 mg kanye, okanye kabini ngemini. Nokuba uqala ngedosi esezantsi, kungcono ukuyikhawulela kwiintsuku ezi-2 okanye ezi-3 ngeveki ubuncinci iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-4 phakathi.
I-Tianeptine hemisulfate monohydrate iza kwifomule okanye kwifom. Kuyacetyiswa ukuba uqale ngedosi esezantsi kwaye unyuke ngamanani amancinci de kufike idosi echanekileyo. Ukongeza, iidosi ezincinci zinciphisa ukubakho kwesiyobisi, ukurhoxa kakhulu kunye nokunyamezelana.
Imithamo ye-50-75 mg inokukhuthaza. I-Tianeptine hemisulfate monohydrate yedosi yokuzihlaziya ye> 100 mg inokubangela ukuba iTianeptine hemisulfate monohydrate ephezulu yokuziva.
I-Tianeptine hemisulfate monohydrate iphucula ubuchwephesha bengqondo kunye nokunciphisa uxinzelelo. I-Neuroplasticity kukukwazi kwengqondo ukuziqhelanisa nokutshintsha xa ufunda; ukufaka isandla ekusebenzeni ngcono kwengqondo kunye nokuphucula amandla okufunda.
Uphononongo lwezigulana ezingama-90 ezine-PTSD lubonise iziphumo ezincumisayo ngokusetyenziswa kweTianeptine hemisulfate monohydrate. Izifundo zikwabonakalisile ukuba ngonyango nge-tianeptine sulphate kunye nokuncitshiswa okubonakalayo kokuphazamiseka kwengqondo. I-Tianeptine hemisulfate monohydrate enikezelwe kwizigulana esele ikhulile ibonakalisile ekuphuculeni uxinzelelo lwe-neurocognitive function kunye nokuphuculwa kwemood.
Uphononongo lokuqala lwezonyango ezingama-68 ezine-ADHD zigqibe kwelokuba amanqaku aphuculweyo aphuculwe kakhulu kwaye i-Tianeptine hemisulfate monohydrate iluncedo ekwenzeni amandla okuqwalaselwa ngcono kunye nokwehla kweendlela zokuziphatha ezingasebenziyo.
♦ I-Tianeptine hemisulfate monohydrate ikwayi-analgesic esebenzayo (i-painkiller), kwanabantu abaphethwe ziintlungu ezingapheliyo. Yindlela esebenzayo yokufumana iimpawu ezinxulumene nemicimbi yezempilo yamathumbu ngokunjalo.
IZiko loNyango lwezeMpilo eCaracas liqhube uvavanyo lweeveki ezingama-52 olungenamkhethe lwabantwana abanesifuba. Izigulana ezilawulwa yi-Tianeptine hemisulfate monohydrate zibonise ukonyuka okukhulu ekusebenzeni kwemiphunga.